सी जिनपिङ बेलुकी ४ः३०-५ः३० बजेको बीचमा नेपाल ओर्लने, यस्ता छन् कार्यक्रमहरू | NepalDut
सशस्त्रका एसएसपी नै बलात्कार आरोपमा पक्राउ
नेकपा विवाद ओली गुट र पार्टीबीचको संघर्ष : खनाल
पोखरामा वर्षाको कहर : ७ जनाको मृत्यु, ११ घाइते
सरकार, टेस्ट घटायौं कि विवरण लुकायौं ?
सी जिनपिङ बेलुकी ४ः३०-५ः३० बजेको बीचमा नेपाल ओर्लने, यस्ता छन् कार्यक्रमहरू
असाेज २४ गते २०७६
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ दुई दिने राजकीय भ्रमणका लागि शनिबार नेपाल आउँदैछन् । सन् १९९६ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले नेपाल भ्रमण गरेको २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्र प्रमुखबाट हुन लागेको हो ।
यस्तो छ भ्रमण तालिका
चिनियाँ राष्ट्रपति सी शनिबार बेलुकी ४ः३० बजेदेखि ५ः३० बजे बीचमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लने छन् ।
त्यसलगतै राष्ट्रपति सीले आफ्ना नेपाली समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीसँग शीतलविनासमा कारिब ६ः३० बजे भेटवार्ता गर्ने छन् । सो अवसरमा दुई देशीबीचको सम्बन्धको विस्तारका विषयमा विचार विमर्श हुनेछ ।
करिब ७ः३० बजे राष्ट्रपति सीको सम्मानमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सोल्टी होटलमा आयोजना गर्ने रात्रिभोजमा उनी सहभागी हुनेछन् । रात्रिभोजसँगै उनको शनिबारको कार्यक्रम सकिनेछ ।
आइतबार बिहान नेपाल–चीनबीच औपचारिक वार्ता हुनेछ । यस वर्तामा पर्यटन, प्रविधि, कृषि र बीआरआईका विविध पक्षमा छलफल हुने र बिहानको १०ः३० बजे द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने प्रारम्भिक कार्यक्रम तय भएको छ ।
यही बीचमा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का शीर्ष नेतासहित राजनीतिक दलका नेताले भेटवार्ता गर्नेछन् ।
राष्ट्र सी नेपाली समयअनुसार १२ः३० बजे नेपालको दुई दिने नेपाल भ्रमण सकाएर करिब १२ः३० बजे स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।
कालिका र माझठानाका किसानलाई बाँदर धपाउने यन्त्र
‘ताल टु ताल’ ट्रेल रेसको योजना
ढोरपाटनका इन्जिनियर १ लाख घूससहित पक्राउ
अझै क्रान्ति किन आवश्यक छ ?
कास्कीमा दुर्लभ ‘किङ कोब्रा’भेटिएपछि संरक्षण शुरु